08 / 08 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: သြဂုတ်လ 8 2019
Bursa ၏ဓာတ်လှေကားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (bursa) အဖွဲ့ဝင်များ, တွေ့ရသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက် '' ဓာတ်လှေကားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာစမ်းသပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာန၏အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောပုံစံအဖြစ်စမ်းသပ်ပြီး BCCI ကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ဓါတ်လှေကားလုံခြုံရေး features ။ Bursa ဓာတ်လှေကားစက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များ, စက်မှုနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန [ပို ... ]
Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကပြောသည် Kurban Bayram စဉ်အတွင်းအခမဲ့လွန်းဘတ်စ်ကားဖြင့်ကြေညာချက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ မတိုင်မှီ Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနတို့ကလာမည့်မနက်စောစော Al-Adha ကောင်းသောသတင်းရောက်လာတယ်။ ကြေညာချက်မှာတော့4နေ့မနက်စောစော Al-Adha [ပို ... ]
Diyarbakırတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခြင်း, အနစ်နာခံ၏နေ့4ပွဲတစ်လျှောက်လုံးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုကိုသင်တာဝန်ခံအခမဲ့ငါပေးမည်။ ဧဝကများနှင့်နိုင်ငံသားများ 63 drive ကိုကဖွဲ့စည်းခံရဖို့လက်စွပ်၏ပှဲ၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကပြုလုပ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရမှတ်မှာသင်္ချိုင်းမှတာဝန်ခံအခမဲ့ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။ Diyarbakir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန [ပို ... ]
Denizli2နေ့အခမဲ့နေ့အတွက်ဘတ်စ်ကား
Denizli မြူနီစီပယ်က, သင်္ချိုင်း၏နိုင်ငံသားများ, သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့မနက်စောစော Al-Adha2အခက်အခဲ၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကအခမဲ့စည်ပင်သာယာဘတ်စ်ကားကိုပြု၏။ Denizli မြူနီစီပယ်, အားလုံးနိုင်ငံသားတွေပှဲနှစျသိမျ့နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အားလပ်ရက်သုံးဖြုန်းနိုင်စေဖို့ [ပို ... ]
အနစ်နာခံအပေါငျးတို့သယူနစ်ပွဲနှင့်အတူ Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၎င်း၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ မည်သည့် platform ပေါ်တွင်လူမှုရေးအသိအမြင်ပုံ Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့သုသာန်မှတာရှုမွို့သာအခမဲ့ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလျှောက်လွှာအတွက်ယခင်ကာလ၌ဤအလယ်ပိုင်းပွဲကိုခံအချို့ရပ်ကွက်အတွက်လျှောက်ထား 45 [ပို ... ]
Gaziantep ဘတ်စ်ကား, ဓါတ်ရထားနှင့် Parkomat အခမဲ့နေ့
Gaziantep တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, အဆင်ပြေဟာမနက်စောစော Al-Adha ၏နိုင်ငံသားများ, သူတို့ရဲ့နေထိုင်တစ်လျှောက်လုံးငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့လုံခြုံဘို့က၎င်း၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းဧရိယာ၏သားကောင်များရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဘို့အခြို့သောထိမြို့ပြလူမှုရေးစီမံကိန်းများ, အအနစ်နာခံအားလပ်ရက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သုဿာန်နှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၏ပွဲမတိုင်မီ4တစ်ရက်နှင့်အတူလူများ၏ဘဝ [ပို ... ]
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ın, Erciyes မှာအရေးပါသောအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့တယ်။ Erciyes သူခဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှခွဲဝေအဆောက်အဦကလွန်ခဲ့တဲ့သူတို့၏မြေကိုလုပ်လိုBüyükkılıçနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Büyükkılıçသာကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ Erciyes [ပို ... ]
မြေအောက်ရထားစီမံကိန်း Gebze Darıcaသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Assoc ။ ဒေါက်တာ Tahir Büyükakın, Gebze Darıcaအဆိုပါ Metro စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းထောက်များကိုဖို့ကြေညာချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဥက္ကဋ္ဌBüyükakın, ဒီအပြောင်းအရွှေ့လွှဲပြောင်းအကြောင်း5ဘီလီယံကိုဖျောပွရကျိုးနပ်ကုန်ကျထားတဲ့ Metro စီမံကိန်း, [ပို ... ]
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုလူသားများနှင့်အခြားသက်ရှိများ၏ကျန်းမာရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေတဲ့အရွယ်အစားရောက်ရှိပါပြီ။ အထူးသဖြင့်မော်တော်ယာဉ်များ၏နံပါတ်ပြင်းထန်သောလေထုညစ်ညမ်းမှုများနှင့်လေးနက်သောကျန်းမာရေးပြဿနာများအညီလေ့လာတွေ့ရှိခံရဖို့စတင်ခဲ့သည်အဘယ်မှာရှိမြို့ကြီးများတွင်ပါ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့, 4,2 [ပို ... ]
ရထားထဲမှာ, သံသယသူ့ဇနီးဖြေရှင်းခဲ့အကျပ်အတည်းအတွက်ကြုံတွေ့သော်လည်းလုပ်သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးခရီးသည်လက်မှတ်အရောင်းအတူလက်မှတ်များခဲ့ကြသည်။ ပို့ဆောင်ရေး TCDD ဒီရည်ရွယ်ချက်,a"ကို terminal ကိုလူတွေက" တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ သေဆုံးသူအရာရှိ, လူတစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်၏ကြေငြာမတိုင်မီလက်မှတ်ရောင်းအား၏ဇနီး [ပို ... ]
၏ 'TCDD ခွငမှသည် Medipol Birgün'ün
Medipol တက္ကသိုလ်, တူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD ပြတိုက်အဆောက်အဦး, နေထိုင်ရန် Center ကသူတို့ကိုသတင်းပေးအပ်ဆန့်ကျင်။ ကောလိပ်ထိုကဲ့သို့ဗီဇာငြင်းဆိုမှု Birger သတင်းစာမှစေလွှတ်တော်မူသော "ထောက်ပံ့ဆက်သွယ်ပါဓာတ်ပုံကိုခွဲဝေခဲ့ပါတယ်" ဟုသူကပြောခဲ့သည်။ တူရကီခင်ပွန်း၏အလယ်တွင်အတွက်သတင်းစာကိုတနေ့ "၏ဇူလိုင်လ 29 edition အတွက် Medipol တက္ကသိုလ်, [ပို ... ]
ဒေါ်လာနှုန်း Down, တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်ပြုရန်အဘို့အ MI တင်ဒါ?
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Cahit Turhan Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်အကြီးမားဆုံးပြဿနာကုန်ကျစရိတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဒေါ်လာစျေး၏မြင့်တက်မှုနှုန်းဖြစ်ပါသည်ကြေညာခဲ့သည်။ ဒေါ်လာလဲလှယ်မှုနှုန်းမျက်စိ re-တင်ဒါအစ္စတန်ဘူလ် Channel ကိုလှည့်ခဲ့ကြ, လဲကျသွားသည်။ ဒီတော့အခါတင်ဒါအစ္စတန်ဘူလ် Channel ကိုကျင်းပကြမည်နည်း တူရကီနီးကပ်စွာနောက်တော်သို့လိုက် [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Assoc ။ ဒေါက်တာ Tahir Büyükakın, Kandıradanခရီးဆောင်ဧရိယာအတွင်းရှိစည်ပင်သာယာလူငယ်နှင့်အားကစားန်ဆောင်မှု 500 ၏လူမှုရေးအဆောက်အဦးများအတွက်စာနယ်ဇင်းသမားများအားပေးပြီးမှနေချိန်မှာကျောင်းသားများနှင့်အပြည့်အဝမှတ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Büyükakınကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသောထုတ်ဖော်စေသည် [ပို ... ]
အဘယ်အရာကိုAlibeyköy Eminonu လမ်းရထားလိုင်းကိုအဆိုပါအချိန် Service ကိုမှဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်နည်း
ဘယ်အချိန်မှာEminönü-Alibeyköyဓါတ်ရထားလိုင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်နည်း နောက်ဆုံးပေါ်ဘာလဲ? စစ်ဆေးမှုများယခုနှစ်အဆုံးမှာလုပ်ပါလိမ့်မည်သည့်လမ်းရထားလိုင်းကိုအလယ်၌ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည် 2020 နှစ်ပေါင်းညွှန်ပြ။ ဓါတ်ရထားလိုင်းကို Eminonu Alibeyköyအစ္စတန်ဘူလ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒါဟာအလုပ်၏လိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီနှစ် [ပို ... ]
ဘယ် Bridges နှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအတွက်အနစ်နာခံအခမဲ့၏ပွဲ?
မနက်စောစော Al-Adha နိုင်ငံသားများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဆက်လက်စဉ်ကစိတ်ဝင်စားမှုများ၏ဘာသာရပ်များတဦးမဟုတ်ပါတံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအနစ်နာခံအခမဲ့၏ကောင်းပြီ, တံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပွဲ? ဘယ်တံတားအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း အဆိုပါမနက်စောစော Al-Adha အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းအဝေးပြေး၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ [ပို ... ]
တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားပျံကား '' Cezeri ''
သူကသူတို့ Baykur နည်းပညာဆိုင်ရာ Manager ကို Selcuk Bayraktar, နေ့တိုင်းအာကာသနှင့်ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရရှိခဲ့ဒေသခံနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်အတွေ့အကြုံများတိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင်းတူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပျံသန်းကားတစ်စီးရှေ့ပြေးပုံစံကိုပွငျဆငျကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ အချိန်ပျံကားတစ်စီးအကြောင်းကိုဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအလုပ် 8 လအတွင်းဖြစ်ပါတယ် [ပို ... ]
Bosch ရဲ့ယနေ့တွင်နှင့် Mobility ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်၏အနာဂတ်
စတုဂတ်နှင့် Frankfurt, ဂျာမနီ - နည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ Bosch ရဲ့ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, တတ်နိုင်သမျှထုတ်လွှတ်-အခမဲ့ mobility, secure နှင့်ချစ်စရာကောင်းဖို့ကြိုးစားနေ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအတူ။ ကုမ္ပဏီကိုယ်ပိုင် IAA 2019, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, နှင့်ကွန်ယက်လျှပ်စစ် mobility များအတွက် [ပို ... ]
အီတလီယာကုမ္ပဏီကြီး Pirelli ကြောင့်ရှေ့ဆက်မယ့်မနက်စောစောအားလပ်ရက်များ၏ယာဉ်မောင်းအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လောင်စာစီးပွားရေးကိုပေးမယ့်သတိပေးချက်ပါပဲ။ ရှိမရှိပေါ် မူတည်. လည်းအသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့တာယာများနှင့်ကုသအခြေစိုက်စခန်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပါအဝင်ချည်အတိမ်အနက်ကိုလျော့ကျလာသီးခြားတာယာအတွက်မမှန်ကန်ကြောင်းလေထုဖိအား, [ပို ... ]
OPET ထံမှ pre-အားလပ်ရက်နေ့ '' ဆီအမှတ်
OPET လောင်စာဆီအချက်များကိုဝင်ငွေဖို့အခွင့်အလမ်းက၎င်း၏ဖောက်သည်ပေးထားပါတယ်။ 3, 200 သို့မဟုတ် 10 တန်ဖိုးရှိ££နှုန်းတစ်ခုချင်းစီကိုငွေပေးချေမှုများအတွက် OPET တစ်ကြိမ်နှုန်း 25 100 ကာလ၌ကွဲပြားခြားနားသောရက်ဘူတာနှင့်လောင်စာ OPET ဖောက်သည်အပေါ်စျေးဝယ်စေသည်, [ပို ... ]
အကြွေး options များပေးဆောင်သြဂုတ်လနှင့် Renault ရဲ့ကြီးထွားလာရာထူးအတွက်စတင်အားလုံးခရီးသည်တင်ကားများနှင့်အလင်းစီးပွားဖြစ်မော်ဒယ်များအတွက်အကျိုးရှိနှုန်းထားများ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အလင်းစီးပွားဖြစ်မော်ဒယ်များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့သုညအကျိုးစီးပွားအပေးအယူ။ ကင်ပိန်း dahilindeclio hbxnumxtl, Megan ၏အစမှစတင် fiyatvexnumxtl အရစ်ကျ [ပို ... ]
Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်စားသောက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့သည်
Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်ဖားပွဲသိပ်သည်းဆကြုံနေရသည်။ ပိုပြီးသန့်ရှင်းကျယ်ဝန်းပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည်ဖို့နေ့တိုင်းပြုသန့်ရှင်းရေးအပြင်စေ့စေ့စပ်စပ်သန့်ရှင်းရေးနိုင်ငံသားများနှင့်အတူသိပ်သည်းဆအကြောင်းပြချက်။6500 တထောင်စတုရန်းမီတာ [ပို ... ]
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာများစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနနှင့်ဘာသာရေးအားလပ်ရက် Asri သုသာန်, သုသာန် k နှင့်သင်္ချိုင်းအတွင်းရှိမြို့သင်္ချိုင်းမှBağçeşmeအခမဲ့လွန်းဝန်ဆောင်မှုနေဆဲဖြစ်သည်။ , ထိုသင်္ချိုင်းအလည်အပတ်မှပထမဦးဆုံးအဘို့ဆောင်သောပွဲသွားကြဖို့နိုင်ငံသားတွေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ဧဝကိုတစ်နေ့ [ပို ... ]
Bursa ပို့ဆောင်ရေး Interchange စမတ်နှင့်အတူဖြေရှင်းပါလိမ့်မည်
နှင့် '' ယူနွတ် Emre လမ်း - Lightning အားကစား Complex စမတ် '- Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အသုံးပြုပုံအဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ Lightning' 'Muhsin Yazicioglu (Root) လမ်း Samanli (11 စက်တင်ဘာလရိပ်သာလမ်း) Street,' 'ဒခရိုင်, ကပိုပြီးခေတ်မီအောင်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင် [ပို ... ]
တူရကီ Wagon Industries, Inc ကို ဇူလိုင်လ 16 2019 အပေါ်ထုတ်ဝေသောကြေငြာ shared ပြီးမှဌာနချုပ်အမြဲတမ်းလုပ်သားများ 26 အားဖြင့်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ စာရေး၏ပုံဆွဲ၏TÜVASAŞစုဆောင်းမှုတစ်သက်သေခံရှေ့နေရှေ့တော်၌ကျင်းပခဲ့သည်။ စာရေးတံ (TÜVASAŞ) တူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များယူထီ၏ရလဒ်များ [ပို ... ]
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဟင်္ Florina နှင့်အတူသြဂုတ် 8 1903
သမိုင်းဟင်္ယနေ့တွင်သြဂုတ်လ 8 1903 Florina အတူဘူတာအကြားတံတားဖကျြဆီးခံခဲ့ရ